Nkebi ahịrịokwu 30 ahọrọ maka akwụkwọ akụkọ | Akwụkwọ ugbu a
Nkebi ahịrịokwu 30 ahọrọ maka akwụkwọ akụkọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Novela
Ee, ọ bụ Ọgọstụ, mana n'ezie enwere ọtụtụ ndị edemede ji akwụkwọ akụkọ ahụ ha bu n'obi see mkpịsị ugodi (ma ọ bụ mkpịsị akwụkwọ na akwụkwọ ndetu). Ọfọn a raara nye nke a nhọrọ nke ahịrịokwu 30 site n'aka ndị edemede dị iche iche na nkọwa na usoro nke Dee akwụkwọ akụkọ.
Nkebi ahịrịokwu 30 gbasara akwụkwọ akụkọ
Ide akwụkwọ akụkọ dị ka iji eri nwere ọtụtụ agba tee akwa mpe mpe akwa: ọ bụ nka nke nlekọta na ịdọ aka na ntị. Isabel Allende, nụkwa
Malite ide akwụkwọ akụkọ dị ka ịgakwuru dọkịta ezé, n'ihi na ị na -emere onwe gị ụdị ọkpụkpọ oku. Sir Kinsley Amis
Ọrụ onye ode akwụkwọ a bụ ime ka okwu were anya ya hụ ihe adịghị ahụ anya. Miguel Angel Asturias
A na -ahazi akwụkwọ ọgụgụ n'etiti ezi mmetụta ole na ole na ọtụtụ ụgha ndị mejupụtara ihe ọtụtụ n'ime anyị na -akpọ ndụ. Sọl na -ada
Ọ bụghị ihe karịrị ndị na -enweghị ike ibi ha na -ede akwụkwọ akụkọ. Alexander Casona
Onye Buda enweghị ike ide akwụkwọ na -aga nke ọma. Okpukpe ya nyere ya iwu, sị: "Enwela mmụọ, ekwula okwu ọjọọ, echela ihe ọjọọ, adịla njọ." William Faulkner
Ide akwụkwọ akụkọ dị ka ịgagharị ụwa mmadụ gbara gburugburu. Maria Granata
Ihe ọ bụla onye na -ede akụkọ na -ebi ma ọ bụ na -eche ga -eme ka ọkụ na -adịghị eju eju bụ ụwa akụkọ ifo ya. Carmen nwere osisi
Ndị ode akwụkwọ akụkọ kacha ukwuu, ndị ukwu n'ezie, dị mkpa n'ihe gbasara nsụhọ mmadụ nke ha na -akwalite, ịmata ohere nke ndụ. R. Levis
N'otu oge akwụkwọ gbasara oge anyị na nkwupụta nsogbu nke nwoke ọgbara ọhụrụ, akwụkwọ akụkọ ahụ ga -emerịrị akọ na uche ọha mmadụ na -enwe mmasị imeziwanye ya. Ana Maria Matute
Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ụdị nka Protestant; ọ bụ ngwaahịa nke uche nweere onwe ya, nke onye kwụụrụ onwe ya. George Orwell
Ana m ede akwụkwọ akụkọ iji tụgharịa ndụ n'ụzọ nke m. Arturo Perez-Reverte
Ọ bụrụ na ị tụọ ndị enyi gị n'akwụkwọ akụkọ mbụ gị, ha ga -akpasu iwe, mana ọ bụrụ na i meghị, ha ga -eche na a raara ha nye. Mọdekaị Richler
Ndị odeakụkọ bụ ndị nche ọnụ ụzọ akwụkwọ. Montserrat Roig
Ahụmahụ akụziworo m na ọ dịghị ọrụ ebube dị na ide - naanị ịrụsi ọrụ ike. Ọ gaghị ekwe omume ide akwụkwọ ọgụgụ dị mma nke nwere ụkwụ oke bekee n'akpa gị. Isaac Bashevis Onye ọbụ abụ
Enwere ike iwere onye na -agụ ya ka ọ bụrụ isi akụkọ nke akwụkwọ akụkọ, na nha anya ya na onye edemede; na -enweghị ya, ọ nweghị ihe a na -eme. Elsa atọ
Abụ m akwụkwọ akụkọ. Abụ m akụkọ m. Frank kafka
Akwụkwọ akụkọ zuru oke ga -atụgharị onye na -agụ ya. Carlos Fuentes
Ndụ na -adị ka akwụkwọ akụkọ karịa ka akwụkwọ akụkọ si yie ndụ. George ájá
Akwụkwọ akụkọ ọ bụla bụ akaebe nke koodu; ọ bụ ihe nnọchianya nke ụwa, mana nke ụwa nke onye ode akwụkwọ a gbakwụnyere ihe: iwe ya, agụụ agụụ ya, nkatọ ya. Mario Vargas Llosa
Maka m, ide akwụkwọ akụkọ ga -eche ihu ugwu ndị gbagọrọ agbagọ na ịrị mgbidi mgbidi na, mgbe ogologo mgba siri ike, rute n'elu. Karịa onwe gị ma ọ bụ tufuo: enweghị nhọrọ ọzọ. Mgbe ọ bụla m dere akwụkwọ akụkọ ogologo, ana m etinye ihe onyonyo a n'uche m. Haruki Murakami
Ugbu a ndị na -agụ akwụkwọ enweghị ohere ikpe m na akwụkwọ akụkọ m ikpe n'ụlọ ikpe kacha sie ike nke dị, ya bụ, n'obi ha na akọ na uche ha. Dị ka oge niile, nke a bụ ụlọ ikpe m chọrọ ka e kpee m ikpe. Uchenna Onyekwere
Ihe niile dị na akwụkwọ akụkọ bụ nke onye dere ya ma bụrụ onye dere ya. Ọnye na -bụ Carlos Castilla del Pino?
Ana m agbalị imepụta akwụkwọ akụkọ na -eme ka ahụ ghara iru ndị mmadụ ala n'ihe metụtara ọha mmadụ anyị na -ejighị kpọrọ ihe. John na-achọ
Enwere m ihe dị mkpa n'etiti echiche niile na akwụkwọ akụkọ abụghịzi ọrụ ntụrụndụ nkịtị, ụzọ iji jiri aghụghọ duhie awa ole na ole, nke bụ ọmụmụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọmụmụ akụkọ ihe mere eme, mana mechara mụọ. Emilia Parto Bazan
Ịmecha akwụkwọ akụkọ bụ ihe dị egwu. Ogologo oge ọ na -ewe iji dee njedebe, ka m na -ata ahụhụ. Imezu ngwụcha akwụkwọ akụkọ nwere ihe na -akụ, n'ihi na ị nwere ike iji ya. Imecha ya dị ka ịchụpụ gị n'ụlọ gị. Ana m ekwupụta na otu n'ime oge kachasị egwu na ndụ m bụ ụbọchị ka m dechara akwụkwọ akụkọ. Almudena Ukwu
N'ime akwụkwọ akụkọ m, enwere ihe niile mgbe ụfọdụ amaghị m etu m ga -esi ebi. Oge ndị ahụ gafere na nke m gaara achọ ịga n'ihu. Akwụkwọ akụkọ na -enye gị ohere imezu oge ndụ ndị ahụ ị tụfuru, ngwa ngwa. Oge ndị ahụ mgbe ịchọrọ ike ikpebi ozugbo wee sị: "Ee, ka anyị mee ya," ọ naghị emekarị. Akwụkwọ akụkọ ahụ na -enye gị ohere ịlaghachi wee mee nhọrọ ziri ezi. Federico Moccia
Ana m agbalị na akwụkwọ akụkọ m bụ ọrụ nka, dịka nnukwu abụ, ezigbo eserese ma ọ bụ ezigbo ihe nkiri nwere ike ịbụ. Enweghị m mmasị n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ omume. Naanị ihe m chọrọ bụ ka m mee ọmarịcha ihe ma tinye ya n'ụwa. John banville
Echere m na akwụkwọ akụkọ ọ bụla bụ, n'ikpeazụ, ịnwa ọnyà ụwa niile n'akwụkwọ, ọbụlagodi na site na "ụwa niile" ị pụtara naanị ibe, akụkụ, obere ihe na -eme n'otu sekọnd. Laura Restrepo
Akwụkwọ akụkọ anaghị amalite dịka mmadụ chọrọ, mana dịka ha chọrọ. Gabriel García Márquez
Isi: Otu narị afọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. José María Albaigès Olivart na M. Dolors Hipólito. Ed. Ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Nkebi ahịrịokwu 30 ahọrọ maka akwụkwọ akụkọ
Echiche nke Sofia